Nagu saabsan - Goldenlaser
Focus on laser wax soo saarka caqli leh
Qoto dheer galay warshadaha xalalka wax soo saarka dabacsan la technology laser
GOLDENLASER - Astaanta caanka ah ee adduunka caanka ah ee soo saaraha qalabka laysarka.
16 sano oo joogto ah horumarinta waayo-aragnimo ee warshadaha laser ah.
Awood u lahaanshaha casriga ah ee warshadahaaga gaarka ah.
Wuhan Golden Laser Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2005 waxayna ku qoran tahay Suuqa Kobcinta Ganacsiga ee Shenzhen Stock Exchange sanadkii 2011. Waa adeeg bixiyaha xalka tiknoolajiyada laysarka dhijitaalka ah waxaana ka go'an inuu siiyo xalka farsamaynta laser-ka ee adeegsadayaasha adduunka.
Ka dib markii in ka badan 10 sano oo horumar joogto ah iyo hal-abuurnimo, GOLDENLASER noqday Shiinaha ee hormuudka ka ah iyo soo saaraha dunida-caan ee qalabka laser. In duurka u-dhamaadka sare qalabka laser digital soo saarka, GOLDENLASER ayaa aasaasay ay technology keentay iyo faa'iidooyinka brand. Gaar ahaan berrinkii dharka, dharka iyo codsiyada laysarka dhar dabacsan warshadaha, GOLDENLASER noqday calaamad u ah Shiinaha ee.
Diirad saar bixinta xalka xal laser oo dijitaal ah, otomaatig ah iyo caqli badan.
- Ka caawi nidaamyada wax soo saarka warshadaha soo jireenka ah inay u gudbaan dijitaal, u jilicsan horumarka cusub
GOLDENLASER wuxuu ku takhasusay R & D, wax soo saarka iyo suuq-geynta Mashiinka goynta laser CO2 , mashiinka laser-ka galvanometer , dhinta laser dhijitaalka ah iyo mashiinka goynta fiber-ka . Khadka wax soo saarka ayaa daboolaya in ka badan 100 nooc sida goynta laysarka, xaradhka laysarka, calaamadaynta laysarka iyo daloolinta laysarka.
Codsiyada waxaa ka mid ah daabacaadda dhijitaalka ah, dharka, dharka, kabaha maqaarka, dharka warshadaha, qalabaynta, xayeysiinta, daabacaadda iyo baakadaha, elektaroonigga, qalabka guryaha, qurxinta, soo saaridda birta iyo warshado kale oo badan. Tiro ka mid ah wax soo saarka iyo teknoolojiyada ayaa helay shatiyadaha qaranka iyo xuquuqda lahaanshaha barnaamijyada, waxayna leeyihiin oggolaansho CE iyo FDA.
MAGAALADA SANADKII 2005
MAYA EE SHAQAALAHA
METERARADA laba jibbaaran
DIIWAANKA SOO SAARKA 2019
Warshad Casri ah • Aqoon Isweydaarsi Sirdoon
Tobannaankii sano ee la soo dhaafay, GOLDENLASER waxay si wanaagsan uga jawaabtay dalabaadka suuqa ee wax soo saarka caqliga leh. Isku-dubarid ilaha gudaha ee warshadaha, oo isku dar tignoolajiyada macluumaadka si aad u abuurto xalal maarayn aqoon-is-weydaarsi caqli-gal ah. Waqtiga lagu gaaro wax-soo-saarka caqli-gal ah, sidoo kale wuxuu kuu keenayaa sahlanaanta awoodda raadinta xogta wax-soo-saarka-waqtiga-dhabta ah, isbeddelka waqtiga-dhabta ah, kormeerka-waqtiga-dhabta ah, si tartiib tartiib ah u yareeya faragelinta bini'aadamka iyada oo la hagaajinayo tayada badeecada iyo wakhtiga bixinta, keena maarayn habboon oo dheeraad ah.
Raadinta mustaqbalka, GOLDENLASER waxay u hoggaansami doontaa horumarka warshadaha sida istiraatijiyadda horumarinta hormuudka ah, si joogto ah u xoojisa hal-abuurka tignoolajiyada, hal-abuurka maamulka iyo hal-abuurka suuq-geynta sida xudunta u ah nidaamka hal-abuurka, waxayna ujeeddadeedu tahay inay noqoto hoggaamiyaha caqli-gal, iswada iyo codsiga laser-ka dhijitaalka ah. xalalka.
NETWORK SUUQA CAALAMIGA
Suuqyada dibadda, GOLDENLASER waxay ka dhistay shabakad adeeg suuqgeyn qaan-gaar ah in ka badan 100 waddan iyo gobollada adduunka oo dhan.
- Golden Laser wuxuu noqday dhoofiyaha ugu weyn ee wax soo saarka leysarka ee Shiinaha.
"Michelle, waxaan haystaa quudin cusub oo ku saabsan GOLDENLASER. Hadda waxaad haysataa koox aad uga fiican. Joe iyo Johnson waa kuwo aad u xirfad badan oo karti leh. Waxay fahmeen codsiga oo ay uga jawaabaan waqti iyo si adag. Hambalyo! Dabcan waxaad sidoo kale tahay mid xirfad leh oo aad fahamsan tahay alaabtaada iyo suuqa aad u badan."
"Rita, sidii had iyo jeerba macaamiishaadu u fiicneyd. Ragga idinka ayaa fiicnaaday oo haddii aan waligeen u baahanahay inaan kala soo baxno waxaad noqonaysaa wicitaankeenii ugu horreeyay."
"Mashiinkaaga laser-ka ah ee Galvo wuxuu leeyahay qiiq aad u wanaagsan; in la gooyo ama la qoro (calaamadda) waa mid aad u dhakhso badan; qaabeynta mashiinka waa mid wanaagsan; mashiinku wuxuu muujinayaa waxqabad wanaagsan; fududahay in la shaqeeyo; way fududahay in wax laga beddelo."
"Mashiinka waa mid aad u wanaagsan. Mr. Robin waa mid aad u fiican. Waxaan ku raaxeysaneynaa la shaqeynta isaga. Aad iyo aad ayuu u fiicanyahay waana dagan yahay. Waxaan jeclaan lahaa dhowaan inaan dalbado mashiin cusub oo fadlan waqtiga soo socda ha badalin farsamada. Waxaan rajeynayaa inaan arko isku xirnaan badan mustaqbalka."